Obama 'really impressed' with Pope's message of equality - သတင်း Rule
အိုဘားမား '' တကယ်သဘောကျ’ တန်းတူရေး၏ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့သတင်းစကားနှင့်အတူ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကဇန္နဝါရီလအပေါ်စိန့်ပေတရု၏တစ်စတုရန်းမှာယေဘုယျပရိသတ်ကိုစဉ်အတွင်းလူအစုအဝေးနှုတ်ဆက် 29, 2014 ဗာတီကန်မှာ
အမေရိကန် သမ္မတဘားရက်အိုဘားမား၏မြှင့်တင်ဘို့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis က၏အားကြီးသောလေးစားပါကြောင်း “စစ်မှန်သောညီအစ်ကိုအသင်းအပင်းများနှင့်ညီအစ်မ၏သဘောနှင့်လျော့နည်းကံကောင်းနေသောသူတို့အဘို့နှင့် ပတ်သက်.,” သောကြာနေ့ထုတ်လွှင့်အင်တာဗျူးတွင်.
“ငါကသူကိုငါခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏အနှစ်သာရကိုသည်ထင်သောအရာကိုဆက်သွယ်ရဲ့လမ်းနှင့်အတူယခုအချိန်ထိတကယ်သဘောကျပြီ,” အိုဘားမား၏ပုံရိပ်ကို refashioned သူပုပ်ရဟန်းမင်း၏က CNN သို့ပြောကြားခဲ့သည် ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း မိမိအ installation ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းက.
အမေရိကန်သမ္မတ, မတ်လအတွက်ဗာတီကန်သွားရောက်မည်သူ, သူ Francis ကကျယ်ပြန့်ခွင့်ပြုချက်ရဖို့လိုတဲ့ဆန်ဒထဲကသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မယုံပြောပါတယ်.
ထက်, “ငါကသူသိပ်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူခြောရှေးရှေးကြောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပေါ်ထင်ဟပ်နေသည်ထင် — ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူမယ့် — သူသညျယရှေုခရစျ၏သင်ခန်းစာများကိုနှင့်ကိုက်ညီသည်ထင်တဲ့သတင်းစကားကိုထွက်ကျရှငျနကွေ,” သမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်.
“ငါမျှော်လင့်တယ်အစည်းအဝေးရဲ့,” သူကစီစဉ်ထားမတ်လကဆက်ပြောသည် 27 ထိုင်ပါ.
ဒီဇင်ဘာလ၌တစ်ဦးမိန့်ခွန်းထဲမှာ, အိုဘားမားပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကအားဖြင့် advanced တစ်ဦးအငြင်းအခုံဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, နီးပါးအတွင်းပထမဆုံး Non-ဥရောပပုပ်ရဟန်းမင်း 1,300 နှစ်ပေါင်း, အလွန်ဆင်းရဲသောသူနှင့်စူပါကြွယ်ဝသောအကြားကွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းထမညီမျှမှုအပေါ်.
“ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်, သူရေးသားခဲ့သည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူတစ်ဦး၏ထိတွေ့ခြင်းကွယ်လွန်သည့်အခါတစ်ဦးသတင်းကို item မရဲ့, ဒါပေမယ့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်နှစ်ခုအချက်များရှုံးရသောအခါသတင်းဖြစ်ပါသည်?”
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကတိုက်တွန်းသောစကားကိုအတွက်စောဒကတက်, ထိုကဲ့သို့သောဝိရောဓိတန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးမှတ် “ဖယ်၏အမှု” တစ်ဦးညီမျှမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ.
နှင့်အောက်တိုဘာလအတွက်, သမ္မတကသူဖွစျသညျကို CNBC ကိုပြောသည် “အကျယ်သဘောကျပြီး” ဆင်းရဲသောသူကိုမှပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့နှိမျ့ခခြွငျးနှငျ့စာနာမှုနှင့်အတူ.
အိုဘားမားဗာတီကန်စီးတီး၌နောက်ဆုံးခဲ့ 2009, သူပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဘင်နီဒစ်တွေ့သောအခါ.
18021	1 ဘားရက်အိုဘားမား, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, ယူနိုက်တက်စတိတ်
← ဘရတ်နဲ့ Angelina အသစ်ရုပ်ရှင်အဘို့အ S.Africa ပြောင်းရွှေ့ဖို့ Radcliffe ချက်ချင်းမာရသွန်တစ်ကျော့ပြန်ထွက်အုပျခြုပျ →